Amandla ashisekayo angaba kanjani abeqisayo? - Mytika Speak
Ikhaya / Ukweqisa / Amandla ashisekayo angaba kanjani abeqisayo?
Umuntu oshisekayo uyakuphazamisa ukuthula kepha bakwenza ngendlela elinganiselayo. Ngakho-ke, izwa kamnandi ngoba kuyidrayivu edinga ukuvezwa. Umuzwa ufana kakhulu nehhashi eligijimayo negagasi lentokozo.
Ukuba nothando kulinganisela i-red ray yamandla okukhanya. Njengoba ukukhanya kuphelela ebumnyameni, kuba njalo extreme futhi kulokhu kuba obsessive kwelinye ukweqisa futhi uthukuthele ngakolunye.
Abantu abaqaphile kunzima ukuhlala lapho okuthile kuzwakala kukuhle kubo. Kuyindlela eyedlulele yokuphazamisa ukuthula lapho umuntu ethanda okuthile kakhulu, aze alahlekelwe amandla okuma noma okuzilawula.
Ngokweqile okukhanyayo, bangaba umuntu ozijezisayo ngokwenza okuthile okungafanele. Ingxenye ekhathazayo ibangela ukuthi bazilimaze bona kaninginingi.
Ngokweqile okumnyama, abantu abathanda ngokweqile bangaba yizicucu. Ukukhathazeka kubangela ukuthi bangakwazi ukugxila kokunye ngaphandle kwalowo abamcathamelayo. Abanye bazoze bazinake ngokuphelele izimpilo zabo ngoba ukunaka kwabo kuphelele empilweni yomunye. Abaningi banomuzwa wokuthi basebudlelwaneni nomuntu abamcathamelayo futhi babheka ukuthi izenzo zabo zibhekiswe kubo, noma ngabe umuntu lowo engazi ukuthi lo ohlaselayo ukhona.
Abantu abanolaka bavame ukubonisa ukuthambekela kobudlova. Udlame lubandakanya ukuthatha igxathu elengeziwe ukuze uphazamise ukuthula. Kubantu abaningi abathukuthele, amandla okuthula angena ngaphansi kwesikhumba sabo futhi abayithandi neze. Bangabala kakhulu futhi bavame ukwethula izingxoxo abazi ukuthi zizoholela kwingxabano eqhubekayo engxoxweni. Lokhu kuvame ukuhambisana nokukwazi ukujija amagama nxazonke ukuze kuqale ukungqubuzana. Abantu abanolaka banentukuthelo ngaphakathi ngoba balimele futhi bazizwa benesizungu kulowo muzwa. Lokhu kubenza bafune ukukhipha ubudlova ukuze abanye bakwazi ukuhamba nabo lapho bezizwa belimele.
Ngokweqile okukhanyayo, bangaba yisiphathimandla esigxeka othile ngezenzo, azithatha njengezenzo ezingafanele. Bangaze bajeze ngenkathi bethi balungile.
Ngokweqile okumnyama, kungaba ngumuntu onodlame futhi othokozela ukubona ukulimala nokwesaba kwangempela emehlweni wesisulu sakhe. Imvamisa udlame lungamandla akhele kakhulu afuna ukukhishwa. Abanye bakhetha ukuphoqa la mandla kwabanye futhi isisulu sigcina ngamandla ngemuva kwalokho, kanti umenzi wobubi uzizwa anelisekile noma ekhululekile okwesikhashana.
Ngisho nangemva kwalokho
umoya wami ngeke
nansi indlela yami,
okubomvu klebhu nge
Amathegiukuqonda kukhathazeka uthando ukukhula komuntu siqu izinkondlo imisebe ebomvu ingokomoya ulaka
February 1, 2021 at 2: 40 am